देशले चुनाव चाहेकै छैन : शम्भु थापा – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०५:२३ English
देशले चुनाव चाहेकै छैन : शम्भु थापा
० मङ्सिर ४ गतेका लागि घोषित संविधानसभाको निर्वाचन होला ?
– यसका पण्डितहरू पाँचजना हुन्, उनीहरूलाई नै सोध्नुपर्छ ।
० को–को हुन् त यसका पण्डित ?
– एकजना खिलराज रेग्मीजी, त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल र विजयकुमार गच्छदार हुन् । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको कर्मकाण्ड गर्न बसेको उहाँहरू हो ।
० उहाँहरू त निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ नि ?
– पाँचजना नै हुन यो देशमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको कर्मकाण्ड गर्न बसेका, अब उनीहरूले जस्तो कर्मकाण्ड गर्छन् निर्वाचन त्यसैमा भर पर्छ ।
० नेकपा–माओवादीबाहेकको चुनावले राजनीतिमा कस्तो असर पार्छ ?
– कर्मकाण्डमा विधि छाड्दाखेरि त्यसको असर के पर्छ भन्ने विषयमा पाँचजना पण्डितहरूलाई राम्ररी थाहा छ । इजिप्टमा मोर्सीलाई हटाउँदा विरोधबाट हटाए तर अहिले सेनाले आफ्नै समर्थनका लागि आउनुस् नारा–जुलुस गर्नुस् भन्नुपर्‍यो । सेनाले अहिले गोली चलाएर मान्छे मारिरहेको छ । राजनीतिमा म मात्रै रहुँ भन्ने भइसकेपछि अरूले पानीजस्तो भएर निकास त खोज्छन्–खोज्छन् । त्यसबेला कोही समुद्रमा पुग्छन् कोही बाटोमै बिलाउँछन् । समुद्रमा पुग्यो भने त त्यसले ठूलो ज्वारभाटाको रूप लिन्छ । बीचैमा हरायो भने कर्मकाण्डीहरूकै समुद्र हुन्छ । यसको प्रभाव मङ्सिर ४ मा मात्रै होइन मङ्सिर ४ अघिदेखि पछिसम्म हुन्छ ।
० खिलराज रेग्मीले वैद्य पक्षलाई चुनावमा सहभागी गराएर लान सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ?
– संविधान नै उहाँहरूले तयार गर्नुभएको छ, त्यसैले कर्मकाण्ड गर्ने ठाउँ कहाँ छ भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई राम्ररी थाहा होला नि । म कर्मकाण्ड गर्ने बाहुन नै होइन । म त कमाएर खाने नेपालीभित्र परँे । त्यसैकारण जजमानहरू को–के छन् भन्ने कुरा त कर्मकाण्ड गर्ने बाहुनहरूलाई थाहा भइहाल्छ नि ।
० उनीहरूले त वैद्य नआए पनि चुनाव गरेर संविधान दिन्छौँ भनिसके ?
त्यसो भए गरे भइहाल्यो नि । चुनाव गर्छौं–गर्छौं भनेर हिँड्ने कुरा नै होइन नि । चुनाव त पद्धति हो प्रक्रिया हो । उल्लास हो, उत्सव हो । जसरी पनि गर्ने भनेर हुन्छ र ?
० सेना लगाएर भए पनि चुनाव गर्ने रे ?
– अहिलेसम्म त्यही कामको अभाव थियो । यदि गर्न लागेको हो भने अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो काम त्यही होला ।
० असन्तुष्ट पक्षलाई पेलेर चुनाव गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन ?
– पेलेर चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त असन्तुष्ट पक्षलाई पो सोध्नुपर्छ । चुनाव बहिष्कार गर्न पाइन्छ तर बिथोल्नचाहिँ पाइँदैन भनेर गृहमन्त्रीले नै भनेका छन् अब बहिष्कारभित्र बिथोल्ने कुरा पर्छ कि पर्दैन ?
० दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन नेपालमा हुन्छ कि हुँदैन ?
– अहिले देशले चुनाव चाहेकै छैन । देशले चुनावको नामको चुनाव मात्रै चाहेको छैन । कसैको बुई चढेर गर्न खोजिएको चुनाव देशलाई चाहिएको छैन ।
० कसको बुई चढेर यो चुनाव गर्न लागिएको हो त ?
– तपाईं आफँै हेर्नुस् खिलराज रेग्मी कसको बुई चढेका छन् । यिनी संविधानको बुई चढेका हुन् त ? त्यो त म देख्दिनँ ।
० तर, मान्छेहरू त संविधानसम्मत सरकार बनेको भन्छन् ?
– मान्छेहरू त भन्छन् तर संविधानसम्मत भएको छैन भन्ने मान्छेहरू पनि छन् नि । प्रधानन्यायाधीश मात्र हुँदा उहाँको नाममा विवाद थियो र ?
० प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्छ ?
– मेरो भनाइ एउटा मात्रै छैन । देशको प्रधानन्यायाधीशले नै संविधान भत्काएर मै देशको प्रमुख हुँ भन्नु र त्यसलाई चार दलका शीर्ष नेताले साक्षी किनारा बस्नुले संविधानसभाबाट कस्तो किसिमको संविधान बनाउन खोजिएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन । संविधान भनेको विश्वास हो आस्था हो । विश्वास भत्किएको, आस्था भत्किएको संविधान कसरी टिक्छ । मेरो भनाइ त २५बुँदे नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने हो । बाधा अड्काउले मूल संविधान भत्काउने कुरा हुँदैन । चारजना र रेग्मीले देशको मूल कानुनलाई झुर कानुन बनाइदिएका छन् । उहाँकै विरोधमै मुद्दा गर्नुपरेको छ योभन्दा लज्जास्पद स्थिति नै हुँदैन ।
० अब राष्ट्रपतिको भूमिका के हुनसक्छ ?
– राष्ट्रपतिको कुरा राष्ट्रपतिलाई नै सोध्नुस् । हामी राष्ट्रपतिकोमा गएर कुरा पनि राख्यौँ । तर, उहाँले अर्कै गर्नुभयो । हामीले भनेको कुरा मान्नुभएन । हामीले त उहाँलाई सबै उघ्रिन आँट्यो, कम्तीमा छोप्ने लँगौटी पनि छ कि छैन भनेर सोध्यौँ ।
१६ श्रावण २०७०, बुधबार ११:१८ मा प्रकाशित